ALT / AST / T-Bil / ALB - Waxqabadka BeerkaⅠ Qalabka degdegga ah ee degdegga ah ee barta baaritaanka daryeelka-Sinocare
ALT / AS / T-Bil / ALB - Waxqabadka BeerkaⅠ Qalabka Raadinta Degdegga ah
[emailka waa la ilaaliyay] Qalabka loo yaqaan 'Alanine Aminotransferase / Aspartate Aminotransferase / Total Bilirubin / Albumin Reagent Kit' ayaa loogu talagalay in tiro ahaan lagu ogaado waxqabadka alanine aminotransferase (ALT) iyo aspartate aminotransferase (AST) iyo uruurinta wadarta bilirubin (TB) iyo uruurinta albumin (ALB) ee ku jirta dhiigga aadanaha. Caafimaad ahaan, waxaa badanaa loo isticmaalaa baaritaanka kaabayaasha cudurada beerka.
ALT iyo AST waa tilmaamayaasha xasaasiga ah ee dhaawaca unugyada beerka iyo heerka dhaawaca beerka. Isku-uruurinta AST waxay sare u qaadeysaa si isdaba-joog ah waxayna ka sii baxeysaa feejignaanta ALT badanaa waxay muujineysaa waxyeelo daran oo beerka ah waxayna calaamad u tahay sii xumeynta cudurka joogtada ah.
Qaaxadu waa wadarta qiimaha bilirubinka tooska ah iyo bilirubinta aan tooska ahayn. Caafimaad ahaan, waxaa badanaa loo adeegsadaa in lagu ogaado in cudurka beerka ama marinka biliary uu ku jiro xaalad aan caadi ahayn.
ALB waxaa soo saara beerka. Marka uu jiro cagaarshow daran (sida beerka cirrhosis), awooda beerka ee soo saarida albumin aad ayaa looyareeyaa, taas oo keenta hoos udhaca kudhaca iskudarsan ee serum albumin.
Nidaamka falcelinta wajiga dareeraha, iyadoo la adeegsanayo habka sicirka & habka habka dhamaadka-dhibcaha ayaa horseedaya natiijo sax ah
Qaaxada: 1.7 ~ 600 olmol / L